'ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကို သိပ်မပြောချင်ဘူး။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာက အားလို့ဝေဖန်နေတာ' လို့ ပြောကြားလိုက်?? - Yangon Media Group
‘ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကို သိပ်မပြောချင်ဘူး။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာက အားလို့ဝေဖန်နေတာ’ လို့ ပြောကြားလိုက်??
မကြာခင်ထုတ်လွှင့်ပြသ တော့မယ့် The Voice Myanmar Season2သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဃသခေ့ တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင် လာမယ့် တေးသံရှင် R ဇာနည်နဲ့ တွေ့ဆုံကာ အခုလိုပဲ မေးမြန်းဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။
မေး – The Voice Myanmar Season2သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဃသခေ့ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင် ဖြစ်တာကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – ပထမအစီအစဉ်ကတည်းက ကျွန်တော့်ကိုဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းလာတာကြောင့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါဝင်ဖျော်ဖြေဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ The Voice Myanmar Season2ကျရင် Coach တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ပေးဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ တခြားပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့သူ တွေ အဆင်ပြေတာကြောင့် လက် ခံဖြစ်တာပါ။
မေး – ဃသခေ့ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာတွေ အဓိကပြင်ဆင်ထားလဲ။
ဖြေ – ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ ဆိုတော့ အဓိကကတော့ The Voice Myanmar Season2တစ်ခုလုံးကို ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်ရှုပြီးတော့ အပန်းဖြေဖို့က နံပါတ်တစ်ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ပြီး တော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲကမှ တကယ် အရည်အချင်းရှိတဲ့သူ Winner ဖြစ်ဖို့က ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ပါ။အဲဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်း ရောက် အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။
မေး – တခြား Coach တွေအ ပေါ်မှာရော ဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲ။ သူတို့နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ သင်ပြပေးရ မှာဆိုတော့လေ။
ဖြေ – ကျားပေါက်၊ နီနီ၊ ရန်ရန် ချမ်းရောက အနုပညာဝမ်းစာအထိုက်အလျောက် ပြည့်စုံတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေနဲ့ယှဉ်ပြီးတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့ကလူ Winner ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမှာဆိုတော့ နည်းနည်း တော့ အခက်အခဲရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ ကြိုး စားပြီးသင်ပြပေးမယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့ လိုက်ဆိုတော့လည်း ကိုယ့်အဖွဲ့က လူတွေအကုန်လုံးကို Winner ဖြစ် စေချင်တယ်။
မေး – ဒိုင်အဖြစ်နဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင် ပွဲတွေမှာလည်း လုပ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ ဒီပြိုင်ပွဲလေးက ဒိုင်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ Coach လုပ်ရမှာဆိုတော့ ဘယ်လိုဟာမျိုးကို ပိုကြိုက်လဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းက Melody World မှာတုန်းက တော့ ဦးလေး(တေးရေး ကေအေတီ) တို့ကမ်းလှမ်းမှုကြောင့် တစ်ခါတစ်လေတော့ ဒိုင်အဖြစ်လုပ်ဖူးတယ်။ ကြာတော့ကြာပါပြီ။ နောက် တယ်လီနောအဆိုပြိုင်ပွဲတုန်းက တစ်ခါဒိုင်အဖြစ်ပါဝင်ဖူးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ။ ဒီ The Voice Myanmar ပွဲနဲ့က မတူဘူး။ ဒါကကျတော့ Coach လုပ်ရမှာဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ ကိုယ်အသင်း၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံး ကောင်းဖို့အတွက် စဉ်းစားရတော့ မှာဆိုတော့ ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုပိုကြိုက် တယ်။ ကျွန်တော်က သူများကိုဆရာ လည်းမလုပ်ချင်ဘူး။ သူတို့နဲ့တိုင် တိုင်ပင်ပင်လေး ပြောဆိုပြီးတော့ လုပ်ရကိုင်ရမှာဆိုတော့ ပိုအဆင် ပြေတယ်။
မေး – လာယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဝင်တွေအပေါ်ရော ဘယ်လိုထင် မြင်မိလဲ။
ဖြေ – အားလုံးက ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့ မတူဘူး။ အခုဟာတွေက မျက်စိပွင့်နားပွင့်ခေတ်ကြီးမှာ အဆိုပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ကြတာဆိုတော့ အထိုက်အလျောက် သိပြီးသား။ တတ်ပြီးသား။ နားလည်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့တွေကို အကြံဉာဏ်ပေးရမှာ ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ခက်မယ်။ သူတို့ တွေကို သီချင်းတွေစဉ်းစားပေးရ တာ ရင်ခုန်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှား ဖို့ကောင်းတယ်။
မေး – R ဇာနည်အဖွဲ့မှာရော ဘယ်လိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေပါလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော့်အဖွဲ့ထဲမှာ က လူစုံတယ်။ ရက်ပ်ပါကလွဲရင် ကျန် တဲ့ Music လိုင်းတွေပါတယ်။ အသံ ကာလာတွေလည်း စုံစုံလင်လင်ရှိ တယ်။ ယောကျာ်းလေး။ မိန်းက လေးလည်း မျှမျှတတရှိတယ်။
မေး – ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေဖန်တဲ့သူ တွေကလည်းရှိနေတာဆိုတော့ ဝေဖန်မှု တွေအပေါ်မှာရော ဘာပြောချင်လဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်ကလေ ဝေဖန် နေတဲ့သူတွေကို သိပ်မပြောချင်ဘူး။ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာက အားလို့ဝေ ဖန်နေတာ။ ကျွန်တော်တို့က တ ကယ်လုပ်မှ တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ တကယ်လုပ်ပြီး တော့ တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲကြည့် တယ်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ စာတတ် တဲ့သူတွေ၊ စာဖတ်တဲ့သူတွေဆိုရင် နားလည်တယ်။ ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သူ့အရှိန် နဲ့ပဲ အားလုံးကလိုက်ပြီးတော့ကြီး ပြင်းတာဖြစ်တယ်။ တိုးတက်ပြီး သားတိုင်းပြည်က ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေ နဲ့ ယှဉ်ပြီးတော့ ပြောနေစရာလည်း မလိုဘူး။ အားလုံးက တစ်ဆင့်ချင်းစီ ပဲသွားမှာပဲ။ လိုရာခရီးကို သူ့အရှိန် နဲ့ပဲ သွားနေမှာ။ အကောင်းဆုံးဖြစ် ဖို့က သူများကိုမဝေဖန်ဘဲနဲ့ ကိုယ့် ဘာသာပြင်ဆင်ဖို့ပဲ အရေးကြီး တယ်။
Psy ရဲ့ အေဂျင်စီနဲ့ စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ HyunA နဲ့ E'Dawn
ကျောက်မိုင်း လုပ်သားအချို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုများ ကျူးလွန်နေခြင်းကြောင့် ကျောက်မိုင်းများ ပ?
တရားမကြောင်းဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှု ရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ် ဂေါပကအဖွဲ့ေ??